Thatha idiphu echibini elibomvana, iLake Hillier | Ukuhamba kwe-Absolut
Thatha idiphu echibini elibomvana, iLake Hillier
Isithombe | I-Wallpapercave
IPlanethi enguMhlaba iyindawo ethokozisayo engapheli ukusimangaza. Ubuwazi ukuthi e-Australia kunechibi elinamanzi apinki ngokugqamile? YiLake Hillier, ichibi lemvelaphi engaqondakali e-Middle Island, isiqhingi esikhulu kunazo zonke eziqhingini zase-Australia iLa Recherche.
Ukufinyelela endaweni lapho kuneLake Hillier akulula. Ababaningi abantu abake bathola ithuba lokuzibonela mathupha ngoba ngenxa yezizathu zokuvikelwa kwemvelo, okungenani ungandiza kuphela phezu kwesiqhingi ukuze ubone ichibi eligibela indiza enophephela emhlane ehamba nsuku zonke esikhumulweni sezindiza i-Esperance.
Uma ngokuzayo ungathanda ukuthatha uhambo oluya e-Australia ukwazi izindawo zalo ezinhle, ubunjalo nezindawo zalo ezihlukile njengalezi ILake HillierNgemuva kwalokho ngizokutshela ngokuningiliziwe konke ngaleli chibi elihle elibomvana.
1 Yini iLake Hillier?
2 Ubani owathola iLake Hillier?
3 ILake Hillier yatholakala kanjani?
4 Kungani amanzi aseLake Hillier ebomvana?
5 Ungaluvakashela kanjani iLake Hillier?
6 Amanye amachibi ayingqayizivele emhlabeni
6.1 Ichibi laseClicos (eSpain)
6.2 Amachibi aseKelimutu (Indonesia)
6.3 I-Moraine Lake (Canada)
6.4 ILake Natron (Tanzania)
Yini iLake Hillier?
IHillier Lake iyi-bubblegum pink lake enhle ngamamitha ayi-600 ubude esiQhingini Ephakathi, isiqhingi esikhulu kunazo zonke eziqhingini zaseLa Recherche eNtshonalanga Australia, endaweni eyihlathi enokufinyelela okunzima. Isidume umhlaba wonke ngombala oyingqayizivele wamanzi ayo, okwenza kube lula kakhulu nge-instagram. Okuhlangenwe nakho okumangalisayo okubukwayo!
Isithombe | Hamba ufunde i-Australia
Ubani owathola iLake Hillier?
Ukutholakala kweLake Hillier e-Australia eyenziwe umdwebi wamabalazwe waseBrithani nomatilosi uMatthew Flinders ngekhulu le-XVIII. Umhloli wamazwe owaduma ngokuba owokuqala ukuzungeza isiqhingi esikhulu sase-Australia futhi owayengumbhali wezincwadi zokuhlola ezibaluleke kakhulu, ikakhulukazi ezinikelwe e-Oceania. Izwekazi elingaphakathi kwalo elinokungafani okweqisayo nokuhle kakhulu kwemvelo emhlabeni.
ILake Hillier yatholakala kanjani?
Ngosuku lohambo oluya e-Middle Island, UFlinders wanquma ukukhuphukela esiqongweni esiphakeme kakhulu ukuze akwazi ukuskena okuzungezile. Kungaleso sikhathi lapho amangala khona ngaleso sithombe esingakholeki esivele phambi kwamehlo akhe: leso siziba esikhulu esikhanyayo esikhanyayo esizungezwe isihlabathi nehlathi.
Omunye umhloli wamazwe onesibindi, ukapteni kaJohn Thistle womkhumbi wokuhambela, akazange anqikaze ukuya echibini uqobo ukuze abone ukuthi lokho akubonile kwakungokoqobo noma kwakuwumphumela wokubuka. Ngesikhathi esondela uthola isimanga esikhulu futhi akazange anqikaze thatha isampula lamanzi eLake Hillier ukuyikhombisa abanye abangane bakho. Ibisalokhu igcina umbala wayo obomvana obububendegum obomvana ngisho nangaphandle kwechibi. Kungasho ukuthini?
Kungani amanzi aseLake Hillier ebomvana?
Kuyimfihlakalo enkulu yeLake Hillier lokho Akekho oye wakwazi ukudalula u-100% yisizathu esenza ukuthi amanzi awo abomvana. Abaphenyi abaningi bacabanga ukuthi ichibi linalo lolo hlobo ngenxa yamagciwane asoqwembe lukasawoti. Abanye basikisela ukuthi imbangela ingxube yeHalobactoria neDunaliella salina. Mayelana nalokhu akusekho ukuvumelana kwesayensi ngakho-ke izizathu zihlala ziyindida.
Ungaluvakashela kanjani iLake Hillier?
Ithi iLake Hillier itholakala eMiddle Island, isiqhingi esikhulu kunazo zonke eziqhingini zase-Australia iLa Recherche. Njengoba ukufinyelela kunzima kakhulu, Ukuvakashela kuleli chibi kungenziwa kuphela ngokundiza ngale ndawo ngendiza enophephela emhlane evela esikhumulweni sezindiza i-Esperance. Kungumsebenzi obizayo, kepha futhi nakho impela.
Amanye amachibi ayingqayizivele emhlabeni
Isithombe | URauletemunoz weWikipedia
Amachibi afana neMichigan, iTiticaca, iTanganyika, iVictoria noma iBaikal ngamanye amachibi athandwa kakhulu emhlabeni.
Kodwa-ke, kuwo wonke amazwekazi kukhona okunye ukugxila kwamanzi okungaziwa kangako futhi okukhanyisa ngokukhanya kwabo siqu ngenxa yezici zabo zokuqala, kungaba ngenxa yokwakheka kwamanzi abo, isenzo samazinga okushisa aphezulu kubo noma izinto eziphilayo ezihlala kuzo. Ngakho-ke, Emhlabeni wonke kunamachibi amahle anemibala ehlukene okufanele ukuvakashelwa.
Ichibi laseClicos (eSpain)
ESpain kunechibi elikhetheke kakhulu elifana neHillier kodwa amanzi alo awakhanyi ngokukhanyayo kodwa aluhlaza okwesibhakabhaka. Laziwa njengechibi laseClicos futhi lisogwini olusentshonalanga yedolobha laseYaiza (Tenerife) ngaphakathi kwepaki yemvelo yaseLos Volcanes.
Okwenza leli chibi lahluke umbala wombala oluhlaza wamanzi alo ngenxa yobuningi bezinto eziphilayo zezitshalo ekumisweni. Ichibi laseClicos lihlukaniswe nolwandle lolwandle olunesihlabathi futhi ixhunywe kuyo ngemifantu engaphansi komhlaba. Yindawo evikelekile ngakho ukubhukuda akuvunyelwe.
Amachibi aseKelimutu (Indonesia)
E-Indonesia kunendawo eyaziwa njengesiqhingi saseFlores lapho i- Intaba-mlilo iKelimutu, enamachibi amathathu amanzi awo ashintsha umbala: kusuka ku-turquoise kuya kobomvu ngokusebenzisa okuluhlaza okwesibhakabhaka nokumnyama. Kuyamangalisa iqiniso? Kuyinto ekufanele uyibone eyenzeka ngenxa yenhlanganisela yamagesi nemiphunga evela ngaphakathi kwentaba-mlilo futhi ikhiqize ukusabela kwamakhemikhali okuhlukile lapho amazinga okushisa ephezulu.
Yize iyintaba-mlilo esebenzayo, ukuqhuma kokugcina kweKelimutu kwaba ngo-1968. Ekupheleni kwekhulu lama-XNUMX, imvelo yayo yamenyezelwa njengesiqiwi sase-Indonesia.
I-Moraine Lake (Canada)
Kutholakala e-Alberta's Banff National Park yiMoraine Lake, ichibi elihle elinomsuka weqhwa onamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka aqhamuka encibilikeni.
Imvelo yayo yemvelo iyamangalisa impela njengoba izungezwe iziqongo ezinkulu zamaRockies eSigodini Sezintaba Eziyishumi. Ngalezi ziqinisekiso, izixuku zabagibeli zithutheleka eMoraine Lake ukuyongena emibonweni. Amanzi alo akhanya ngamandla emini, lapho ukukhanya kwelanga kushaya echibini ngqo kanjalo kungakuhle ukuthi uqale uhambe ekuseni ukuyobona, lapho amanzi ebonakala esobala futhi ekhombisa indawo enhle ahlelwe kuyo.
Ngaphezu kokuthi echibini le-moraineEBanff National Park efanayo kunamachibi asePeyton naseLouise, nawo amahle.
ILake Natron (Tanzania)
Kutholakala emngceleni ophakathi kweTanzania neKenya, IChibi i-Natron Ichibi lamanzi kasawoti avaliwe, ngenhla kweGreat Rift Valley. Ngenxa yesodium carbonate namanye amakhemikhali amaminerali angena echibini evela ezintabeni ezizungezile, amanzi alo ane-alkaline ane-pH emangalisayo ye-10.5 ngenxa ye-sodium carbonate namanye amakhemikhali amaminerali.
Amanzi amabi kangako angadala ukusha okubi kakhulu emehlweni nasesikhunjeni sezilwane ezisondela kuwo, ezingabulawa ubuthi. Ngakho-ke, iLake Natron Uvuke nesicoco sabantu ababulala kakhulu ezweni.
Kepha maqondana nokubukeka kwayo kwangaphandle, leli chibi lithola umbala obomvu noma opinki oyingqayizivele, kwesinye isikhathi lize libe liwolintshi ezindaweni eziphansi, ngenxa yamagciwane amancane ahlala koqweqwe olwenziwe ngosawoti one-alikhali. Kuyamangalisa!
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Thatha idiphu echibini elibomvana, iLake Hillier
Ukuzilungisa nokunakekela umzimba eGrisi lasendulo